ट्रम्प पुत्री इभान्का बन्लिन् त विश्व बैंकको अध्यक्ष ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय ट्रम्प पुत्री इभान्का बन्लिन् त विश्व बैंकको अध्यक्ष ?
on: January 12, 2019 अन्तरराष्ट्रिय, मुख्य खबर, समाचार
ट्रम्प पुत्री इभान्का बन्लिन् त विश्व बैंकको अध्यक्ष ?
पुस २८, काठमाडौं (अस) । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैङ्कका वर्तमान अध्यक्ष जिम योङ किमले राजिनामा दिएसँगै फेबु्रअरी १ देखि अध्यक्ष पद खाली हुँदैछ । किमलाई विस्थापित गर्न सम्भावित नयाँ अध्यक्षको खोजी भइरहेको छ ।
यस्तोमा केही अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी जेठी छोरी तथा उनको सल्लाहकार इभान्का ट्रम्पको नाम पनि बैंक अध्यक्षका लागि विचारणीय रहेको समाचार छापेका छन् ।
विश्व बैंकमा अमेरिकाको नियन्त्रणकारी मताधिकार छ । बैंकको अध्यक्ष अमेरिकी प्रशासनले नै छान्दै आएको छ । अध्यक्ष पदका लागि अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले कयौं उम्मेदवारहरुको नाम प्राप्त गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयले अध्यक्ष चयनको लागि आन्तरिक समीक्षा प्रक्रिया पनि शुरु गर्न लागेको छ । यस्तोमा शुक्रवार मात्रै फाइनान्सियल टाइम्स लगायत सञ्चार माध्यमहरुले इभान्काका साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघकी पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीको नाम समेत विचाराधिन रहेका बताएको हो ।
सम्भावित उम्मेदवारमा अमेरिकी अर्थमन्त्रालयका अन्तरराष्ट्रिय मामिला अधिकारी डेभिट मलपास, यूएसएडका प्रमुख मार्क ग्रिनको नाम पनि छ । यस पटक पनि केही गैर–अमेरिकी उम्मेदवारको नाम पनि सुन्नमा आएको छ । नाइजेरियाली अर्थशास्त्री न्गोजी ओकोन्जो–इवेला, रूवान्डेली अर्थशास्त्री तथा अफ्रिकी विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष डोनाल्ड कबेरुका र इन्डोनेशियाका पूर्व अर्थमन्त्री मुल्यानी इन्द्रावतीको नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारको सूचिमा छ ।
किमले गत सोमवार कारण नखुलाइकन बैंकको अध्यक्ष पदबाट अचानक राजीनामा दिएका थिए ।